PressReader - Isolezwe: 2017-10-12 - Kusenzima ukuqagela ngomonakalo eKZN
Kusenzima ukuqagela ngomonakalo eKZN
ISIFUNDAZWE asikazofakwa ohlwini lwezindawo ezihlaselwe yinhlekelele emuva kwezikhukhula ezidlule nemiphefumulo ngoLwesibili. Lokhu kushiwo nguNkk Weziwe Thusi obambele uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdadu esifundazweni, uNkk Nomusa Dube-Ncube, obethula umbiko ngomonakalo odalwe yimvula. UNkk Thusi uthe kusenzima ukuqagela ukuthi mungakanani umonakalo njengoba amathimba esaqhubeka nokuhlola isimo kodwa ubukeka uzodla izigidi zamarandi.
Esithangamini nabezindaba, uNkk Thusi ubehambisana noNgqongqoshe wezeMpilo uDkt Sibongiseni Dhlomo, uMnuz Ravi Pillay wezokuHlaliswa kwaBantu neMeya yeTheku uNkk Zandile Gumede. Umonakalo omkhulu wenzeke esibhedlela iKing Edward lapho kuphazamiseke amagumbi ayisithupha okuhlinza. Omunye umhlengikazi osebenza kula magumbi, uthe kucishe ngisho ugesi ngesikhathi kuhlasela imvula. Uthe kudingeke bazimboze iziguli belinde ukuthi imvula idlule kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Uthe bagcine behlinze iziguli ezintathu kuphela. Izolo, bekusamile ukusebenza kula magumbi amanye abesakhucululwa.
UDkt Dhlomo uthe iziguli zizodluliselwa kwezinye izibhedlela kusalungiswa isimo eKing Edward.
“Sinethemba lokuthi amagumbi okuhlinza amathathu azolungiseka maduze, kuqhubeke umsebenzi. Ezinye iziguli ebezize esibhedlela kudingeke zihlale ngaphandle ngoba ezinye izindawo zokulinda zigcwele amanzi. Uhlelo olukhulu esinalo elokuthi kwakhiwe esinye isibhedlela ngoba iKing Edward isindala. Seyitholakele indawo eCator Manor kodwa akuyona into engenzeka maduze,” kusho uDhlomo.
Ezinye izibhedlela ezithintekile yiPrince Mshiyeni Memorial, Clairwood, Wentworth, INkosi Albert Luthuli Central naseSt Aidans. Kuthiwa kungene amanzi kwaphephuka nophahla kwamanye amabhilidi.
Zingu-42 izikole ezithikanyezwe yimvula, okwenze kwaphazamiseka ukufunda. Phakathi kwazo kubalwa UMlazi ComTech High lapho kuthikamezeke amakilasi alinganiselwa ku-20. Okhulumela uMnyango wezeMfundo, uMnuz Muzi Mahlambi uthe bazoqinisekisa ukuthi akuphazamiseki ukubhala kuka-matric. Kuphazamiseke nokusebenza kukagesi ezindaweni eziningi eThekwini, imeya eqinisekise ukuthi isimo siyalungiswa. Imeya ibonge abasebenzi nonjiniyela abasebenze amahora amaningi bezama ukulungisa isimo.
Ngemigwaqo egcwala amanzi, imeya ithe kunohlelo lokulungisa izitamkoko ezenza kugcwale amanzi uma lina ngenxa yokungcola.